China Cold tikaisa dzichiumbwa muchina kushandiswa muupenyu vagadziri uye bhizimisi | Zhongtuo
Kana toreva mashoko chando rinopfungaira Anoumba michina, vazhinji vanhu havasi kuziva. Asi kana zvasvika pakuvaka dzimba, zuva nezuva hatigoni kuisiya. Tora Brazile chirongwa semuenzaniso kuratidza sei imporant kutonhora rinopfungaira Anoumba michina vari.
Brazil ane zvachose kunyika nharaunda 8.547.400 mativi makiromita (46% kwenharaunda South America), zvinzvimbo zvepamusoro reshanu munyika; rine vanhu mamiriyoni 202, ndiwo nyika chaiyo muLatin America. KuBrazil simbi mhangura reserves chinzvimbo cheshanu munyika, uye nyika yechipiri pakukura ekisipota iron esimbi. Kugadzirwa bauxite wechipiri chete Australia, pamwe simba maindasitiri zvinogona. The zvicherwa akadai uranium exchange, manganese uye nickel vane zvinogona mumatanda makuru. Freshwater zvinhu pamusana anenge 12% pose Freshwater mari. Brazil ndiyo nyika guru kofi mugadziri uye ekisipota uye chinozivikanwa "kofi umambo". Brazil ndiyewo nyika guru shuga mugadziri uye ekisipota, chechipiri pakukura soybean mugadziri uye ekisipota, uye yechitatu pakukura zviyo mugadziri. Corn kunze kwenyika Rank pakati pamusoro shanu munyika uye nyika guru ekisipota kuti nyama uye huku.
Asi vakawanda Chinese cognition, Brazil ndiyo ine nyika ine mafashamo zvinodhaka, kakawanda akapakatira, uye hurumende zvikuru uori.
Pausiku September 2, 2018, moto yakatanga National Museum of Brazil muna Rio, uye moto kwakatora usiku akaparadza akaunganidzwa mamiriyoni 20. Chikonzero kwokutanga moto wakanga kuti miziyamu wacho mari akanga akatambanudzwa, okumusoro akanga ari yakapararawo, uye miziyamu raiva zvinobata moto makemikari asi vasina moto dziviriro hurongwa. Asi chokwadi, nokukuvadzwa ichi-gore 200 okuberekwa Portuguese nhoroondo chivako chaizvo omuzasi zvakajeka nyika nokuparara: nyonganyonga yezvematongerwe enyika, zvoupfumi simba, Brazil ndiyo ine simba chinogona asi haana kukwanisa kubvisa yacho " pakati mari musungo ", kunyange yose zvoupfumi kuera A muenzaniso nyika tichingotarisira kuenda downhill.
Chokwadi, mashoko ari pamusoro apa hapana chokuita ino. Nhasi, nokuratidza kuva munharaunda diki homestay (kana vashanyire dzisina) chirongwa, tora Kutarira mbada uye kuona kushanda chiedza simbi kuBrazil.
Stud Track Machine, Step Tile Ndakasarudza Machine , Metal Deck Achigadzira Machinery , Hg50 Tube Line , Rolling Shutter Door Roll Achigadzira Kuita Machinery , akaturika Sheet Tile Kuita Machine ,